Torohevitra 10 ilaina ho an'ny mpivarotra vao vao | Martech Zone
Torohevitra tena ilaina 10 ho an'ny mpivarotra vao vao
Talata, Janoary 17, 2017 Zoma, Oktobra 2, 2020 Lexie Lu
Vonona ny hanapaka ny nifinao amin'ny tontolon'ny varotra haingana sy mahaliana ianao. Ny fanentanan-tena dia tena tsy isalasalana fa zava-dehibe, fa ianao koa mila mailo ny torohevitra voasedra ara-potoana ary mahatakatra ny fomba fampiharana izany amin'ny asanao sy ny tontolon'ny asanao. Aza mitsahatra mamaky mandritra ny teboka manan-danja sivy izay hanampy anao hahita, hitombo ary hivoatra mandritra ny sehatry ny varotra.
Mahaiza manontany tena - Andramo hatrany ny mijery ireo toe-javatra, teknolojia ary fironana miaraka amin'ny tanjona hamongorana izay azonao angonina avy amin'izy ireo hampiasaina amin'ny asanao varotra. Raha manana fomba fisainana mety ianao, ny resadresaka tsy fantatra amin'ny namanao akaiky indrindra dia mety hiteraka hevitra vaovao momba ny fampiroboroboana ny fitsidihana boky farany ataon'ny mpanjifanao.
Eritrereto eo ivelan'ny boaty - Amin'ny maha mpivarotra vao manomboka anao dia tsy manana zokiolona eo amin'ireo namanao ianao. Noho io zava-misy io, ny fifandraisana sy ny loharano sasany izay mety ho azon'ny olona za-draharaha kokoa dia tsy voafetra ho anao amin'izao fotoana iasanao izao. Na izany aza, tsy misy antony tokony hahakivy. Mamporisika ny tenanao hieritreritra ivelan'ny boaty, mihoatra ny tetika sy teknika mahazatra. Ny fahaiza-manaonao dia mety handoa ny mpanjifa ary hahazo dera avy amin'ny mitovy taona aminao. Mba fahazarana mieritreritra amin'ny fomba tsy mifanaraka amin'ny antenaina dia manontania tena tsy tapaka hoe:Misy zavatra tsy hitako ve?"Na"Azoko atao ve ny mizaha izany amin'ny fomba hafa?
Tambajotra toy ny Pro - Satria vaovao amin'ny sehatry ny varotra ianao dia mety hahatsapa farafahakeliny farafahakeliny noho ny fahatsapana tsy fahampian'ny traikefa, ampiarahana amin'ny fahalalana fa mbola tsy mahafantatra anao ny olona. Na izany aza, mbola azonao atao ny mampiseho amin'ny hafa fa vonona ny hisandratra ianao mianatra ny fomba hahatonga anao ho tambajotra serasera tsara.
Isaky ny any amin'ny kaonferansa ianao, miresaka amin'ny mpiara-miasa aminao mandritra ny sakafo atoandro na mipetraka eo ambony lamasinina mandritra ny dianao, dia miomàna hiresaka momba ny asanao. Diniho izay olona mifanena aminao amin'izay mety ho mpiara-dia aminao izay mety hitondra ny asanao any amin'ny sehatra hafa. Tazomy eo am-pelatananao ny karatra fandraharahana ary manorata “kabary fanandratana” iray farafaharatsiny azonao ampiasaina rehefa misy manontany hoe: “Ka inona no ataonao?” Miezaha mba hanana fitondran-tena tsara indrindra amin'ny fotoana rehetra koa.
Ny fientanentanana nataonao dia mety hahatonga ny olona eo amin'ny manodidina anao ho liana te hahafantatra anao tsara kokoa ary hanao izay azony atao hampandrosoana ny asanao, fa mety hisy vokany mifanohitra amin'izany koa.
Fehezo ny hafatrao - Ny faharesen-dahatra dia tsy tsotra araka ny fahitana azy, satria misy singa tsy voafehinao. Azonao atao ny mitantana ny ampahany amin'ny hafatra ampitainao amin'ny alàlan'ny fampiasana teny manintona, tantara azo tsapain-tanana, ary ohatra mampihomehy, fa ny atidohan'ny olona koa dia mandray ny vaovao henony ary mampifandray izany amin'ny zavatra niainany taloha. Tsy azonao fehezina io lafiny io, fa afaka mampiasa hery amin'ny fomba fahitana ny hafatra ianao.
Ny fomba iray hanaovana izany dia amin'ny alàlan'ny fitaratra, teknika iray izay maka tahaka ny fitenin-tenan'ny olona ao amin'ny mpihaino. Ny mirroring dia manampy amin'ny fananganana fifandraisana ary hahatonga ny olona hahatsapa ho maivamaivana kokoa eo anatrehanao, ka hahatonga azy ireo hanana fisainana malalaka momba izay lazainao. Araka ny fanadihadiana sasany, ny varotra dia nitombo 12.5 ka hatramin'ny 66 isan-jato rehefa teknika fitaratra no ampiharina.
Mahalalà anao amin'ny mari-pamantarana marketing - Misy fomba mora hilazana raha toa ka mandeha araka ny kasaina ny tetika varotrao. Angamba ny iray amin'ny mpanjifanao dia superstar mozika taloha izay miverina amin'ny indostrian'ny fialamboly taorian'ny fiatoana 10 taona. Lazao fa nahatsikaritra ny filaharany Billboard haingana haingana ianao ny herinandro taorian'ny nandefasanao dokam-barotra feno tamin'ny magazina lehibe ary nanombohana ny fampielezan-kevitra natokana ho an'ny Youtube. Azo inoana fa be vintana ireo zavatra nataonao tamin'ny fanaovana doka momba ny famoahana ny tsimok'aretina nohatsaraina.
Na izany aza, amin'ny tranga sasany dia mila izany ianao miankina amin'ny fandrefesana tsy dia miharihary loatra hamaritana raha mahasoa ny zavatra ataonao, na raha ilaina ny fanovana. Ny data momba ny fitsidihana tranonkala, ny fanatrehana kaonseritra, ny fahalianan'ny mpanakanto manerana ny fantsona media sosialy ary na dia ny fampidinana an-kira aza dia afaka mitantara ny fahamendrehana amin'ny fomba marketing.
Jereo hatrany ny fandrosoan'ny indostria - Efa nianaranao ny maha-zava-dehibe ny fananana toe-tsaina tia karokaroka ary mahatsapa fa saika ny fifampiraharahana rehetra mety handrisika hevitra tsara ho an'ny asan'ny varotrao. Toy izany koa, miasà mafy hijanona eo an-tampon'ny fivoaran'ny indostria. Ny diary, tranokala ary bilaogy ara-barotra dia manome fahitana tena tsara izay afaka manampy anao hianatra momba ny fomba fiasa mahomby alohan'ny hahatongavan'izy ireo amin'ny ankapobeny. Misoratra anarana amin'ity fanontana Martech ity ary henoy Douglas Karr's Martech Zone Podcast amin'ny tafatafa! Tsy ho azonao ny lahatsoratra rehetra, fa rehefa mandeha ny fotoana dia hampitombo ny fahalalanao hatrany.
Raiso ny aingam-panahy avy amin'ny olona mendri-piderana - Rehefa miasa eo amin'ny sehatry ny indostrian'ny varotra ianao, dia manàna fanetren-tena ary asehoy foana ny fiavian'ireo olona tianao. Ireo olona ireo dia mety tsy ao amin'ny sehatry ny varotra akory, saingy mbola afaka mampianatra anao toro lalana mahasoa izy ireo amin'ny fanatanterahana ny tanjonao. Raha malaza ny olona manome aingam-panahy anao, diniho ny fisintomana podcast, ny famakiana autobiografia, na ny fijerena ireo fanadihadiana amin'ny Youtube mba hahazoana antsipiriany bebe kokoa momba ny fomba fiasan'ny sain'izy ireo.
Mikaroha teknolojia marketing ho an'ny marketing - Araka ny filazan'ny mpandinika indostria sasany, ny fahalalana ny automatisation marketing dia an fahaiza-mitaky fangatahana izay afaka manampy anao handroso eo am-pitetezana faritra tsy miovaova hatrany. Ankoatry ny fanananao fahalalana momba ny lohahevitra iray mihabetsaka dia mety ho lasa mahomby kokoa amin'ny adidy isan'andro ianao. Ny automatisation marketing dia manamora kokoa ny fanaparitahana ny teny sy ny famoronana fitarihana ary amin'ny serasera amin'ny mpanjifa fa tsy mandany fotoana amin'ny alàlan'ny fahaverezana.
Asehoy ny faharetana - Amin'ny hazakazaka haingana handrosoana sy hahazoana valiny amin'ny lisitry ny mpanjifanao dia mety tsy haharitra ianao, indrindra raha toa ka tsy mandeha ny teknika vao napetraka. Na mafy toy inona aza indraindray, dia manaova toe-tsaina maharitra. Mety tsy hahita tombony lehibe ianao mandritra ny alina. Ilaina ny faharetana, indrindra alohan'ny handefasana angon-drakitra hahitana raha marina ny ahiahinao.
Midira amin'ny fiarahamonina marketing - Ny varotra maoderina dia miankina betsaka amin'ny teknolojia hanaparitahana sy handrefesana tsara ny paikady miaraka amin'ny loharanom-bola voafetra. Ny fitaovana dia eto hanampy ary afaka mianatra taonina ianao raha manontany fotsiny ny manam-pahaizana amin'ny fiarahamoninay. Aza hadino ny miditra amin'ireo vondrom-barotra manerana ny haino aman-jery sosialy - indrindra ireo izay miresaka momba ny varotra ao anatin'ny orinasa misy anao. Tsy ho azonao ny resaka rehetra - fa haka torohevitra tsara ianao izay hanampy anao hanitatra ny fahalalanao rehefa mandeha ny fotoana.
Tongasoa, Marketer Vaovao!
Antenaina fa ireto torohevitra folo ireto dia manampy anao hatoky tena kokoa amin'ny maha mpivarotra vaovao anao. Aza adino, na dia rehefa mifindra avy amin'ny matihanina mpivarotra vao manomboka amin'ny manam-pahaizana voamarina aza ianao, dia misy zavatra bebe kokoa ianarana hatrany.
Tags: ahoana ny fomba ho mpivarotraorinasamianatra marketing-barotraindostrian'ny marketingMartechNetworktambajotrampivarotra vaovaompivarotra vaovarotra novice
Lexie Lu dia mpamorona bilaogera UX tsy miankina. Manaraka ny fironana famolavolana tranonkala sy UX farany izy ary manana kaopy akaiky foana. Manoratra hatrany izy Roast famolavolana ary azo arahana ao amin'ny Twitter @lexieludesigner.
Inona ny paikady, tetika ary fantsona tokony hifantohan'ny mpivarotra amin'ny 2017
Faritra fanovana 3 ho an'ny sehatra fangatahana amin'ny 2017